မေတ္တာတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဖိုးချစ်သဘင် သုံးလအခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် ပေးသွားမယ့် ဖိုးချစ်…. – 7Day Update News
မေတ္တာတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဖိုးချစ်သဘင် သုံးလအခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် ပေးသွားမယ့် ဖိုးချစ်….
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာ့သဘင်လော ကရဲ့ ထိပ်တန်းသဘင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖိုးချစ်ကတော့ မြန်မာ့သဘင်ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်သလို လူငယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တာမို့ မြန်မာ့သဘင်အဆင့်မြင့်တိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာလည်း သဘင်သည်တွေ ပွဲမကရလို့ အဆင်မပြေတာမျိုးမရှိရလေအောင် နည်းပညာအသုံးပြုပြီး Facebook Close Group လုပ်ကာ လစဉ်ကြေးနဲ့ မြန်မာ့အကသဘင်တွေကို စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေသူပါ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ သဘင်ချစ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဖိုးချစ်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ စာရင်းသွင်းသူများစွာရှိပြီး ဒီနေ့မှာတော့ အခုလိုအားပေးကြတဲ့ သဘင်ချစ်သူများကို မေတ္တာတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ သဘင်ချစ်သူတွေကို ဖိုးချစ်ရဲ့ Close Group Member အနေနဲ့ သုံးလအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အယောက်(၃၀) တိတိကို ဒီကံစမ်းမဲလေး ဖောက်ပေးသွားမှာပါ။
ဒီကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်ကံစမ်းလိုသူတွေအနေနဲ့ ပထမဆုံး မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်တို့ကတဲ့ဇာတ်အလှသဘင် Facebook Page မှာ တင်ပေးထားတဲ့ ကံစမ်းမဲပို့စ်လေးကို Like And Share လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေနဲ့ ကိုယ်သွားကြည့်ဖူးတဲ့ ဖိုးချစ်ပွဲတွေထဲက အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကွန်မန့်ပေးရမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲကာလကိုတော့ နိုဝင်ဘာ(၁၆) ရက်နေ့ကနေ (၂၀) ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး နိုဝင်ဘာ(၂၃) ရက်နေ့မှာ မဲနှိုက်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်လို့ သုံးလတိတိ ဖိုးချစ်သဘင်ကို အလကားကြည့်ရှုခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေ းကြီးကို လက်မလွတ်ရအောင် ဖိုးချစ်ရဲ့ Page လေးမှာ သွားရောက်ကံစမ်းနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ျမန္မာ့သဘင္ေလာ ကရဲ႕ ထိပ္တန္းသဘင္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဖိုးခ်စ္ကေတာ့ ျမန္မာ့သဘင္ဥကၠဌတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို လူငယ္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တာမို႔ ျမန္မာ့သဘင္အဆင့္ျမင့္တိုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာကိုဗစ္ကာလမွာလည္း သဘင္သည္ေတြ ပြဲမကရလို႔ အဆင္မေျပတာမ်ိဳးမရွိရေလေအာင္ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး Facebook Close Group လုပ္ကာ လစဥ္ေၾကးနဲ႔ ျမန္မာ့အကသဘင္ေတြကို စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနသူပါ။
ကိုဗစ္ကာလမွာ သဘင္ခ်စ္သူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ ဖိုးခ်စ္ရဲ႕အစီအစဥ္ေလးကိုေတာ့ စာရင္းသြင္းသူမ်ားစြာရွိၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့ အခုလိုအားေပးၾကတဲ့ သဘင္ခ်စ္သူမ်ားကို ေမတၱာတုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း မွ်ေဝလာပါတယ္။ သဘင္ခ်စ္သူေတြကို ဖိုးခ်စ္ရဲ႕ Close Group Member အေနနဲ႔ သုံးလအခမဲ့ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အေယာက္(၃၀) တိတိကို ဒီကံစမ္းမဲေလး ေဖာက္ေပးသြားမွာပါ။
ဒီကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ေလးမွာ ပါဝင္ကံစမ္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ ပထမဆုံး ၿမိဳ႕ေ႐ႊမန္းသားဖိုးခ်စ္တို႔ကတဲ့ဇာတ္အလွသဘင္ Facebook Page မွာ တင္ေပးထားတဲ့ ကံစမ္းမဲပို႔စ္ေလးကို Like And Share လုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေနနဲ႔ ကိုယ္သြားၾကည့္ဖူးတဲ့ ဖိုးခ်စ္ပြဲေတြထဲက အမွတ္တရဓာတ္ပုံေလးနဲ႔အတူ အမွတ္တရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကြန္မန္႔ေပးရမွာပါ။ ၿပိဳင္ပြဲကာလကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ(၁၆) ရက္ေန႔ကေန (၂၀) ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုဝင္ဘာ(၂၃) ရက္ေန႔မွာ မဲႏႈိက္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္လို႔ သုံးလတိတိ ဖိုးခ်စ္သဘင္ကို အလကားၾကည့္ရႈခြင့္ရမယ့္ အခြင့္အေရ းႀကီးကို လက္မလြတ္ရေအာင္ ဖိုးခ်စ္ရဲ႕ Page ေလးမွာ သြားေရာက္ကံစမ္းႏိုင္ဖို႔ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။